KDE Plasma Mobile 21.07 yakatoburitswa uye inouya nezvakawanda zvinogadziriswa uye kugadzirisa | Kubva kuLinux
KDE Plasma Mobile 21.07 yakatoburitswa kare uye inouya nekugadzirisa kwakawanda uye kugadzirisa
Iyo Plasma Nhare Yekuvandudza Chikwata ichangobva kuziviswa kuburitswa kweshanduro nyowani yeKDE Plasma Mobile 21.07 inova ndiyo nyowani yekuvandudza yemwedzi uye inonyanya kusanganisira kugadzirisa bug.
Kune avo vasingazive nezve KDE Plasma Mobile, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndizvo chikuva chakavakirwa parunhare mbozha yePlasma 5 desktop, iyo KDE Sisitimu yemaraibhurari mashanu, iyo Ofono nharembozha, uye Telepathy kutaurirana fomati.
1 About KDE Plasma Nhare
2 Main nyowani maficha eKDE Plasma Mobile 21.07
About KDE Plasma Nhare
Chimiro inosanganisira zvinoshandiswa seKDE Unganidzo kubatanidza foni nedesktop system, gwaro rinoona Okular, VVave mumhanzi mutambi, Koko uye Pix mufananidzo muoni, Buho system mareferenzi manotsi, Calindori kalendari kuronga, Index faira maneja, Tsvaga application maneja, SpaceBar SMS kutumira chirongwa, pakati pemamwe maapplication kubva kuPlasma Mobile chirongwa.
Kugadzira iyo interface yekushandisa, Qt, seti yeMauikit zvinoriumba uye neKirigami fomati kubva kuKDE Maitiro anoshandiswa, zvichikubvumidza iwe kuti ugadzire zvinowirirana nzvimbo, zvinokodzera mafoni, mapiritsi uye maPC. Iyo kwin_wayland composite server inoshandiswa kuratidza mifananidzo. PulseAudio inoshandiswa kugadzirisa kurira.
Main nyowani maficha eKDE Plasma Mobile 21.07
Mune iyi vhezheni itsva zvakawanda zvakagadziriswa zvakagadzirwa uye nezvavo semuenzaniso muDiler mune inowanikwa kuti ufoneUye zvakare, matambudziko ane nhamba dzenyika dzese dzakachengetwa mubhuku rekero pasina nyika yekutanga dzakagadziriswa.
Ari mukati SpaceBar, iyo interface yakagadziridzwa, kubvira ikozvino inoratidzwa nemazvo kubva panotumirwa maSMS, pamwe ne zvikanganiso pakutumira SMS zvinoratidzwa uye mhedzisiro yekukundikana mishumo yakapihwa panguva yekutakura. Yakawedzera kuratidzwa kwenhamba yakatumirwa meseji.
Kune rimwe divi, zvinotaurwa izvo inogadzirisazve iyo interface yekushandisa kuongorora Qrca barcode, Uye zvakare, iko kugona kusarudza akasiyana kamera uye nekupa kugona kuchinjisa matikiti ebhajeti kuKDE Nzira yekushandisa yakawedzerwa. Mune dialog dialog, kugona kupasa ma URL kumasevhisi akaita seImgur kwaitwa uye chiratidzo chekutakura chawedzerwa.
Mune karenda kuronga hurongwa de Calindori, izvi zvakagadziridzwa, pamusoro pechinetso chekumutsa foni panguva yehusiku zvisina zvazvinoreva (izvo zviri pachena kuti zvinokonzeresa kubuda kwebhatiri) yakagadziriswa.
Mukushandisa kuteerera podcasts ye Kasts, zvinhu zvakawanda zveizvi zvakagadziridzwa zvakanyanya, nekuti semuenzanisokana kuwedzera peji Rekutsvaga kutsvaga zvemukati pane podcastindex.org sevhisiTsigiro yakawedzerwawo kuti irambe ichitora zvisina kukwana mapodcast uye maratidziro ekumhanya ekumhanyisa akagadziridzwa. Yakawedzera sarudzo yekuvhara otomatiki kurodha pasi yezvikamu zvitsva uye mifananidzo yepodcast kana ichibatanidzwa kuburikidza nenhare mbozha.
Yeimwe shanduko dzinomira mushanduro iyi nyowani yakaburitswa:
Zviratidzo muKRecorder, KWeather uye KClock zviri mune mamwe masisitimu epuratifomu.
Nyaya dzakasiyana dzakatarwa muKWeather pamwe nekugadziriswa kunokutendera kuti usarudze nzvimbo dzakasiyana.
MuKClock, basa rakaitwa kusimudzira kugamuchirwa kwemaaramu kana nhare yakamiswa uye manyorerwo ehurukuro akachinjwazve kuti aoneke achienderana nedzimwe nhaurirano dzemuno.
KRecorder yakagamuchira iwo akafanana theme fixes yakashandiswa kuKClock, saka ikozvino zvinoita kunge inowirirana pamapuratifomu zvakare.
Basa rakaitwa kuwedzera mashandiro epaneru yepamusoro.
Fixed suspend inhibition muGNOME uye Phosh.
Implementation yekudzoreredza episode yekutamba chinzvimbo yakagadziridzwa. Panofanira kunge kusisina anonzwika glitches kana uchivhura iyo app.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kugona kuziva zvakawanda nezvazvo nezve KDE Plasma Mobile unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » KDE Plasma Mobile 21.07 yakatoburitswa kare uye inouya nekugadzirisa kwakawanda uye kugadzirisa
Uye zvakadii nezve kubhurawuza internet?